Ngoro OL - OL: Chipo chisina kutarisirwa chaMarcelo, Aulas haati kwete - Olympique Lyonnais - FOOT 01 - TELES RELAY
HOME » SPORTS OL-OL: Chipo chisingatarisirwi chaMarcelo, Aulas haati kwete - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Ngoro OL - OL: Chipo chisina kutarisirwa chaMarcelo, Aulas haati kwete - Olympique Lyonnais - FOOT 01
Mufananidzo Icon Sport
rakabudiswa Chishanu 17 May 2019 ku15: 30 In: OL, Mercato, Foot Europeen.
Gore rakapfuura, Marcelo akanga achiri kufungidzirwa kubasa rekudzivirirwa kweOlympique Lyonnais.
Kunze kwekuti nguva dzinoshanduka zvakananga mubhola. Kubva panguva ino, muBrazil pane zvishoma pane kutora boka rake pasi. Pfungwa huru isina simba yekudzivirirwa kweGones, chete yepfumbamwe yeL1 ino nguva, mutambi wemakore 31 haasisiri kunhuhwirira utsvene muLyon. Nokudaro, kuenda kwake munguva yechando yekutsvaga zwindo firiji inowanikwa.
Kuva nerwendo rwakanaka kubva kune vatungamiri varo, Marcelo angatowana nyika inokosha kwaari: Turkey. Zvechokwadi, maererano nevenhau Günes, mukuru wezvidziviriro akaderedzwa ne ... Besiktas, yekare yekambani (2016-2017). Pasi pebvumirano kusvikira 2021, iyo Auriverde inogona kudzoka shure kwegore maviri pa OL. The Black Eagles yeIstanbul iri kumirira firiji yekutsinhanisa zvakadaro. Chii chinofadza Jean-Michel Aulas.
Nyaya iyi yakatanga kutanga FOOT 01
Spain: Mudzidzisi Luis Enrique akasara pasinei nedambudziko rake
Hertha Berlin anoenderera mberi kuna Pal Dardai mushure me23
VANHU & VANHU3,576
TECH & TELECOM1,993